Masaxa Jumlada Jumlada ah waxaa kujira fitamiin E iyo C Supplement nafaqada wajiga saarida waxsoosaarka waxsoosaarka saaraha iyo soo saaraha | Kafiican
Magaca Product: Nadiifinta iyo mashiinka wax lagu nadiifiyo ayaa ku tirtira fiitamiin e, fitamiin c
Lambarka Moodalka: QMSJ-310
Waxyaabaha ay ka kooban Aqua, Glycerin, Tocopheryl (Vitamin E), ChamomillaRecutita (matricaria) Extract Extract, Cetearyl Alcohol, Cetearyl isononanoate, Glyceryl Stearate, Cetyl Palmitate, Butylene Gylcol, Disodium EDTA, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Proplyene Gcol, Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol, Faytamiin C
Cadad goos goos ah: 30 masax baako kasta 60 wadar tirtiro
Isticmaal Gaara: Nadiifi, ka saar waxyaabaha la isku qurxiyo, wejigaaga tirtir.
MOQ: 5000 nooc
Masaxada masaxayaasha qurxinta waxay leeyihiin qoyaan dhexdhexaad ah, maro cudbi jilicsan iyo cabir ku habboon. Jilicsan oo aan xanaaq lahayn, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa maqaarka xasaasiga ah. Waxyaabaha dabiiciga ah ee masaxa waxyaabaha tirtiraha ayaa leh naqshad cabir dheeri ah oo weyn, hal xaashi ayaa ka saari karta qurxinta wajiga oo dhan, taas oo ku habboon oo deg deg ah. Qani ku ah fiitamiinnada, waa jilicsan oo maqaarka u fiican, masaxda masaxda aalkolada aan aalkolada lahayn, xitaa mascara si fudud ayaa looga saari karaa. Ay ku jiraan maaddooyinka liinta, shukumaanada tirtireysa waxyaabaha tirtiraya waxyaabaha lagu nadiifiyo timaha ayaa ku darsata dhalaal iyo firfircoonaan maqaarka ka dib marka laga saaro qurxinta, midabkuna uma eka mid caajis ah.
Macsalaameyso culeyska, ka-saarista ka-fudud oo sahlan. Waxay kakooban tahay masax qurxiyo hodan ah oo si tartiib ah u tirtira haraaga qurxinta adoon jiidan maqaarka, una reeba maqaarka mid tarjumaya. Biyaha ayaa masaxa si meesha looga saaro qurxinta.
Waxyaabaha suufka saafiga ah oo tayo sare leh, qaab dhismeedka wanaagsan, dabacsan iyo ilmada u adkaysta, fududahay in la isticmaalo oo aan sahlaneyn in la qaabeeyo. Saddex nooc oo ah dhar aan tolmo lahayn oo leh qaabab kala duwan ayaa la dooran karaa. Cadaan aan-tolmo lahayn, dhar aan-tolmo lahayn, luul aan-tolmo lahayn.
Plain tolmo aan dhar lahayn tolmo wanaagsan: habka fudud iyo kharash yar.
Qaabka la duubay oo ah dhar aan tolmo lahayn: Waraaqda nudaha qoyan waxaa lagu xardhay qaabab qurux badan, taas oo ay aad u jecel yihiin dumarka jecel waxyaabaha quruxda badan.
Qaabka luul oo ah dhar aan tolmo lahayn: Dharka aan tolmada lahayn wuxuu yeelan doonaa soo bixitaano hadhuudh ah sida luul. Waxay kordhin kartaa khilaafka inta lagu jiro isticmaalka waxayna ka dhigeysaa saameynta nadiifinta mid wanaagsan.
Si dibedda loogu isticmaalo oo keliya. Ka fogow taabashada indhaha Haddii falcelin xun ay dhacdo, jooji isticmaalka oo la xiriir dhakhtar. Ka fogee meel carruurtu gaarto. Ha ku keydin qorraxda qorraxda tooska ah ama heerkulka sare. Ha qubeysan
Hore: Cunnuga lagu beddeli karo ubadku waa masaxayaa Reerka Udgoon ma leh
Xiga: Warshad OEM 80 waxay masaxdaa bacda nadiifinta iskucelceliska 75% masaxa aalkolada
Masaxaadda Ka-saarista Qurxinta Gabowga
Masaxa qurxinta ugufiican ee Indhaha xasaasiga ah
Maskaxda Qurxinta Ugu Fiican Mascara
Nadiifinta iyo qurxinta tirtirka jirka ee leh Vitamin E
Qurxinta Qurxinta Nadiifinta Towelettes
Masaxa Qurxinta Dabiiciga ah
Masaxa Masaxa Qurxinta Aalkolada Aan Laheyn
10ka Maydho ee tirtiray qurxinta
Maskaxda Qurxinta Biyaha Ku Salaysan
Masaxa Biyaha Si Looga Saaro Qurxinta
Qurxinta maqaarka maqaarka jilicsan ee jilicsan ka saar cl ...
Nadiifinta iyo qoyaanka qoraalada firfircoonaanta ...
Qoyaanka maqaarka u nugul maqaarka u nugul saaxiibtinimada m ...